पोस्टरकविता अभियान ५३ः पाठकलाई समाजक‍ो भाषासित कविहरूले जोडिरहेका छन् | साहित्यपोस्ट
रवि रोदन प्रकाशित २८ आश्विन २०७८ ०८:०१
शरद शऋतुको आगमन। सारा नेपालीले मान्दै आएको महान् चाड दशैँ। दशैँ भनेपछि सबै आफन्त टाढा-नजिकबाट भेला हुनु, मीठो-मसिनो खानु, रमाउनु अनि अग्रजबाट टीका लाउनु आशीष थाप्नु हो। नेपालीहरुले यो चाड मान्नु मेलमिलापमा रहनु र रमाउनु पनि हो।
रिस, अहंकार आडम्बरमाथि विजयी पाउने एउटा सुअवसर। धनी-गरीब सबैले एकसाथ मान्ने चाड।
विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरू आफूले मान्ने चाड, संस्कृति, लाउने जातीय पोसाक, रीतिरिवाज सम्झेर नेपाली हुनुको गर्व महसुस गर्छन्।
अनि त्यसमा पनि ज्यादा गर्व गर्ने कुरा त आफूले बोल्ने नेपाली भाषा। हो, भाषालाई माया गर्नेहरू नै साहित्यप्रेमी बन्छन्। साहित्यपोस्टमा जुडेका सारा नेपालीहरू त्यही आफूले बोल्ने नेपाली भाषाको मोहले नै यता टाँसिएका छन्।
लेखक, पाठक र सम्पूर्ण साहित्यप्रेमीले साहित्यिक खुराक पाइराखेका छन्। सामाजिक सरोकार र सामाजिक जिम्मेवारीको बोध गराउने काम साहित्यले नै गराउँछ।
साहित्यपोस्टमा लागि परेका लेखकहरु, सम्पादकहरू यही कामकुरोमा लगनका साथ लागेका पनि छन्। साप्ताहिक साहित्यिक खुराकहरूमा एक पोस्टरकविता पनि हो। यस साता दशैँ विशेष कविताहरू पोस्टरमा लाउने भयौँ। मेलमा कविताहरू आए पनि दशैँ सम्बन्धित कविताहरू कमै देखिए। अनि मैले केही राम्रा कविलाई आग्रह गरेँ कविताहरूको निम्ति। केही दिनमा पठाउने भने कविहरूले। मलाई भने हुटहुटी भयो र यसपालि त मैले पनि प्रयास गरेर एउटा कविता पोस्टरमा लाएको छु।
कविहरूबाट कविता पाएँ। कविता पढेँ। बालापनमा हामीले रमाइलो गरेर मानेको दशैँ र हाम्रा आमा-बाको संघर्षहरू ती कवितामा भेट्टाएँ। कविताले बोकेको दशैँ केही छुट्टै छ।
नेपालीहरुको संघर्ष, दुःख, वियोग यी सब कवितामा मन कुटकुटाउन आएका छन्। विदेशतिर हुने, लाहुरमा हुने नेपालीहरुलाई कति मन दुख्दो हो, यो दशैँमा आफन्तहरुका बीचमा नहुँदा !
नेपालीहरुले प्रत्येक वर्ष टीका लाएर थापेको आशीष कता हराउँछन् होला ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरु मनमा उब्जिन्छ।
हामी आर्थिक अवस्थाले कमजोर छौँ । देशमा राजनीति गर्नेहरूले देश सपार्न सकेनन् । इमान्दरी देखाउन सकेनन् । हामी सपना र भविष्य कमाउन विदेश र खाडीतिर पलायन भएका छौँ। हाम्रो देश, हाम्रो जाति कहिले आफ्नै बलबुतामा खडा हुने र समृद्धशाली बन्ने …?
तर यी सब हुँदाहुँदा पनि फेरि भेट्ने एउटा सुनौला आशा मनमा पालेर हामी रमाउन छाडदैनौँ।
यस्तै सकारात्मक सोच बोकेर पनि हामी अघि लम्कनु छ।
यसपालि पोस्टरकवितामा हामीले पढ्ने कविताहरूले हामीलाई निकै गम्भीर बनाउन बाध्य बनाउनेछ।
पोस्टरकविताको गरिमा यस्तै उत्कृष्ट कविताहरूले माथि पुर्याएको हो। यहाँ अग्रज र अनुज दुवै कित्ताका कविलाई हामी पढ्नेछौँ।
प्रिय पाठक ! तपाईंले पोस्टरकवितामा एकैपल्टमा यस्ता शक्तिशाली कविको कविताहरू पढ्न पाउनु साँच्चै गज्जब कुरा भएको छ।
क्वान्टम फिजिक्सले कवितालाई डिभाइन साउन्ड भनेको छ अनि यसलाई पढेपछि तपाईं एउटा विशेष अवस्थामा पुग्नुहुन्छ र घोरिनुहुन्छ। आम पाठकलाई समाजक‍ो भाषासित कविहरुले जोडिरहेका छन्।
सबैमा बडा दशैँको शुभकामना।
कविहरू सेलिब्रेटी भन्दा कम होइनन्
रवि रोदन २१ आश्विन २०७८ ०८:०१
रवि रोदन १४ आश्विन २०७८ ०८:०१
साहित्यपोस्ट ७ आश्विन २०७८ ०८:०१
२८ आश्विन २०७८ ०८:०१